Agụụ Nkedo | Urethane Nkedo | Plastic Prototype Parts - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
Ọrụ / agụụ Nkedo
CreateProto, na-eduga onu nke agụụ mgbatị technology, nwere ike ịmepụta silicone roba Ebu na-amị urethane nkedo akụkụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Mee urethane site na usoro a dị mma iji nwalee akụkụ nke nrụpụta, ọrụ, yana nyocha nyocha.
Nhọrọ Mmepụta Short-Run: Obere ogbe Plastic Prototypes
CreateProto si agụụ mgbatị technology awade a dịgasị iche iche nke ihe ikwado ihe e kere eke nke igba urethane akụkụ, a na-maka ọtọ ule, tupu mmepụta nwale na ala olu mmepụta. Akụkụ urethane na-adị ngwa ma dịkwa ọnụ ala na-enweghị mkpa itinye ego ọ bụla na-arụ ọrụ igwe mgbe ọnụọgụ bụ naanị obere usoro dị mkpụmkpụ, enwere ike ịnye ya n'ime izu ole na ole n'ọtụtụ oge.
Agụụ mgbatị (makwaara dị ka polyurethane mgbatị) nwere ike iji na-anya simulate ikpeazụ injection kpụrụ akụkụ ma ọ bụ okokụre ngwaahịa. N'ozuzu, a na-eji ebu silicone mee ihe na-eji ebu ma jiri akụkụ CNC ma ọ bụ SLA dị ka ụkpụrụ nnabata. Ebu ndị a na-eme ka ihe ederede na ederede mejupụta ma na-enye ha ngwụcha site na otu akụkụ ruo na-esote. Nwere ike nweta nsonaazụ mmepụta dịka nsonaazụ gụnyere njirimara igwe, agba, na imecha.
Site na ahụmịhe afọ iri abụọ, otu ndị ọkachamara ọkachamara Createproto na-enye ọrụ mgbatị dị oke egwu maka obere plastik dị obere, ma na - enyere gị aka ịtinye nguzozi ziri ezi n'etiti ogo dị elu, akụkụ iji oge na mmepụta oge. Chọta ozi ndị ọzọ gbasara usoro mkpofu agụụ anyị, ị nwere ike ịrịọ nkwuputa ebe ahụ.
Ime Master Pattens maka Urethane Nkedo
A na-ekpebi ogo nke akụkụ nkedo site na ogo nna ukwu, yana ọtụtụ ndị nna ukwu na-arụ ọrụ site na CNC mgbe ịkwesịrị ijide nnagide dịka +/- 0.05mm. Na mgbakwunye, anyị ga-atụle ime nna ukwu site na SLA maka akụkụ ndị ahụ nwere akụkụ dị mgbagwoju anya. Igwe CNC na-ewe ogologo oge ma na-efu ihe iji mee nna ukwu ahụ, ebe SLA nwere ike mepụta ndị nna ukwu ọsọ ọsọ, ma nwee ike hụ na atụmatụ mgbakọ ahụ na-etolite n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi.
Ọnụ ndị nna ukwu ahụ dabere na ngụkọta nke ihe nkedo achọrọ na njedebe. Ọ bụrụ na ndị mgbatị buru ibu bụ naanị ọtụtụ iberibe, mgbe ahụ, otu nna ukwu ga-ezu, ma ọ bụrụ na nke ukwu bụ ihe karịrị 30 iberibe, na-atụle nnyefe oge, anyị ga-eme 1-2 nna ukwu otú anyị nwere ike ime ka ndị ọzọ silicone ebu na-eme mgbatị akụkụ Ọsọ ọsọ.
Mgbe ihe onye ahịa chọrọ chọrọ ndidi, na-egbu maramara ma ọ bụ ọbụna akụkụ anya doro anya, a ga-arụpụta usoro nna ukwu na igwe CNC nke ejiri nkọwapụta nkọwapụta dị elu yana ogo dị elu.
The ọrụ aka-egbu maramara akụkụ ga-kenkowaputa imecha na ngwa anya doo anya. Ka ọ dịgodị, anyị nwekwara ike agba akụkụ elu maka udidi ma ọ bụ satin mmetụta simulate ikpeazụ ebu udidi nke ngwaahịa. Ndị na-akpụzi silicone ga-edepụta nkọwa na textures site na nna ukwu mbụ, yabụ akụkụ nkedo ga-apụta otu ihe ahụ nna ya ukwu na-enweghị mmecha ọ bụla n'elu.
Silicone Rubber akpụzi Ime
Ejiri silicone roba ebu (nke a makwaara dị ka RTV ebu) dabere na ụkpụrụ nna ukwu. Ọnọdụ kemịkalụ, nkwụsi ike nke onwe na mgbanwe nke silicone roba bụ ihe magburu onwe ya na ọ na-enye ntakịrị shrinkage ma na-ebugharị nkọwa dị mma site na nna ukwu iji kpụzie.
The ndụ nke silicone ebu na-metụtara ndị mgbagwoju anya nke mgbatị akụkụ. N’ozuzu ya, ọ na - ewepụta mkpụrụ iri na abụọ ruo iri abụọ na abụọ tupu mbibi. Ọ bụrụ na nhazi nke akụkụ ahụ dị mfe, otu ebu nwere ike ịfe akụkụ 20; mgbe ọ bụrụ na akụkụ ahụ chọrọ ogo dị elu dịka akụkụ doro anya doro anya, otu ebu nwere ike ịme naanị 12 ma ọ bụ 10 akụkụ nkedo.
Nzọụkwụ ingmepụta Silicone Rubber Mould
Nna-ukwu kwesịrị ka ọ rapara na ụfọdụ ihe nkiri dị nro iji mee ka ọkpụkpọ ahụ dị mfe ịkpụ, nke ga-eme dị ka eriri maka ihe ikpeazụ ahụ.
A na-akwụsịtụ ụdị nna ya ukwu n'ime igbe nwere ọnụ ụzọ ámá na oghere ya; a na-etinye risers n'akụkụ ka ikwe ka ikuku gbapụ site na njedebe ikpeazụ.
A na-agbanye silikọn gburugburu nna ukwu ahụ ma jiri agụụ wepu ikuku niile. Nke a na-gwọrọ ke oven, na okpomọkụ nke 40 ℃. Ọ na - ewekarị awa 8-16 dabere na olu ebu.
Ozugbo silicone roba gwọrọ, igbe na risers na-ewepụ; dị ka a na-ewepụ nna ukwu ahụ na silicone iji mepụta oghere, a na-emezi silicone roba ebu.
Polyurethane Nkedo Usoro Ihe
Polyurethane mgbatị nwere ike n'ụzọ zuru ezu dakọtara ahịa 'nkọwapụta, n'agbanyeghị na agba, udidi na kenkowaputa imecha, fanye na n'elu ịkpụzi, ma ọ bụ ọbụna optically doro anya.
CreateProto tozuru etozu usoro obi sie ezi akụkụ replication na-agbanwe agbanwe n'ibu Njirimara. Anyị mgbatị technicians ịchịkwa niile arụmọrụ kwa: inggwakọta, de-gassing, edemede, preheating, nkedo na de-ịkpụzi, ikwe ka nso-zuru okè mbipụta nke nna ukwu ụkpụrụ na-kere, na-enye a ọkọlọtọ ndidi on ± 0.15mm / 100mm, na nkenke kachasị elu nwere ike iru ± 0.05 mm.
Nzọụkwụ gaa Urethane Usoro Nhazi
Nkwadebe nke mbụ, a na-etinye ebu silicone na oven ma kpoo ya 60 Celsius C-70 Celsius C.
Chịkọta ebu ahụ tupu ị tụfuo polyurethane. Họrọ onye na-agbazi ihe kwesịrị ekwesị (ma jiri ya nke ọma) dị ezigbo mkpa iji zere nkwụsi ike na ntụpọ n'elu.
Kwadebe resins polyurethane iji kpoo ya ihe dika 40 Celsius C tupu ojiji. Gwakọta resins abụọ na-eme ihe n'ụzọ ziri ezi, wee kpalite kpamkpam na degas maka 50-60 sekọnd n'okpuru agụụ.
A na-agbanye resin ahụ n'ime ebu n'ime ụlọ agụụ na-achịkwa kọmputa, wee gwọọ ya ọzọ na oven. Nkezi oge ọgwụgwọ: oge ​​1-3 maka obere akụkụ yana oge 3-6 maka nnukwu akụkụ.
Wepu resin akụkụ site na silicone ebu mgbe gwọchara ya. Wepu uzo na uzo; hapụ kpọmkwem ihe odide nke mbụ.
Kwadebe ịmeghari usoro a.
Mepụta Parts Urethane Nke nwere ọtụtụ ihe resin
Urethane resins bụ polymer nwere ọtụtụ njirimara, ike, na ojiji. Urethanes nwere ike isi ike, elastomeric, nwee agba, doo anya, see agba, ma kpuchie ya. A na - emepụta ihe ndị kachasị dị ka plastik na - emepụta ihe.
CreateProto na-enye ihe dị iche iche iji zute ngwa gị, gụnyere Hei-Cast si Japan na Axson si France. Akụrụngwa nwere ụfọdụ njirimara dị ka plastik na-emepụta injinia, dịka ABS, PMMA, PC, PP, PA, were gabazie. Nkedo akụkụ nwere ike iche site transperent, translucent ka agba na site adụ roba na ike plastic. Ihe dị iche iche nwere mmetụta ndị ahụ na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ọgwụ dị elu (120 ℃) ​​ma ọ bụ na-eguzogide ọkụ (UL94-V0), na resins jupụtara na iko na silicone siri ike dị iche iche.
Ohere nke urethane nwere enweghi ngwụcha, ọ na-egosipụtakwa oke olu dị ala.
Polyurethane agụụ Nkedo Ngwa
Nrụpụta Ọrụ Ọdịda Ala / Short Production Na-agba ọsọ
The agụụ agụụ mgbatị bụ zuru okè n'ihi na elu àgwà plastic prototypes. Mgbe mpịakọta anaghị egosi na itinye ego na ntinye na mkpụmkpụ na-agba ọsọ ọsọ, ọ nwere ike mezue izu tupu ịmalite ngwa ọrụ ngwa ngwa. Ọrụ anyị ndị na-arụpụta ọrụ dị elu na-enyere gị aka ịmepụta omenala na akụkụ dị mgbagwoju anya na-emepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa karịa ngwa ọrụ na ịkpụzi.
Nnwale Injinia / Nnwale Ule
Usoro ọgbụgba urethane na ngwa ọrụ dị ọnụ ala anaghị etinye ọnụ na-eme ka ọ dị mfe ma nwee akụ na ụba maka nyocha injinia ọ bụla dị mkpa yana mgbanwe mgbanwe. Tụkwasị na nke a, a ga-eji ndị a rụọ ọrụ nyocha tupu ha anwale ngwaahịa mmepụta ngwaahịa ma nye akụkọ ma ọ bụ ọbụna nweta nnabata asambodo ọ bụla.
Estdị Aesthetic / Color & Texture Studies
Nkedo akụkụ nwere ike ịbụ a zuru set aesthetic nlereanya dị iche iche na agba, textures na risịrị n'okpuru otu imewe echiche. Ọ bụrụ na ị maghị ụdị agba ọ ga-adabara adaba maka ngwaahịa, ị nwere ike ịmezi ụdị silicone iji mepụta ọgbụgba 10-15 ma tee onye ọ bụla na agba imewe gị na textures iji tụlee n'ime n'oge nzukọ n'etiti ngalaba imewe ma ọ bụ ọbụlagodi nzukọ nzukọ.
Moddị Njikere / Ngosipụta Ahịa
Ọrụ ndị na - emechi ya na njedebe dị elu na - eme ka urethane rụọ akụkụ dị mma maka ule ndị ahịa na nyocha onye ọrụ. Itinye usoro urethane a n'usoro pụtara na enwere ike ime mgbanwe ngwa ngwa maka nyocha ọzọ ma ọ bụ ịmalite ahịa. Na ahia obula ma obu ihe ngosi obula, ị nwere ike igosi ndi mmadu ndi nwere mmasi otutu ihe omuma. A chọkwara ịkpụzi Urethane maka foto na ịkwadebe broshuọ ụlọ ọrụ ma ọ bụ tinye ya na weebụsaịtị webụsaịtị maka ndị ahịa nwere ike.
CNC Rapid Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Otito Prototyping, Fast Prototyping, CNC Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing,